Chikafu - Bezzia | Bezzia
Nutrition iyo nzira yehupenyu iyo zvipenyu zvinodyisa chikafu nezvinwiwa mumiviri yavo. Nechikonzero ichi, iwo ese nyaya dzekudya zvakawandisa uye maitiro ainoita muviri wedu. Iyi inyaya yakakosha nekuti inobata huremu uye hutano hwevakadzi, nzvimbo mbiri idzo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana isu zvatinoda kutora zvakanyanya.
Nutrition Iyi ndiyo nzira iyo chikafu chine zvadzakabata kana zvimwe pamuviri wedu uye tiine ruzivo rwakakosha, tinogona kudya zvakanaka uye kuita kuti chikafu ichi chiende nemutsetse watinoda kana zvasvika pakukora kana kurasikirwa uremu.
Ndosaka tichikukurudzira kuti uverenge zvinyorwa izvi uye nekudaro ugone kudya zvine mutsindo uye kuratidza chimiro chakaisvonaka panguva imwe chete.
Kuva nemukati wakanaka wematumbo kwakakosha kuti unakirwe noutano hwakanaka. Nekuti kubvisa tsvina kubva mumuviri kuri ...
kubudikidza Susana godoy inoita 5 mazuva .
Iwe unoziva kuti kune mavitamini mazhinji atinogara nawo mazuva ese. Ivo vese vane akateedzana mabhenefiti ayo ...
6 zvekudya zvinoita kunge zvine hutano, asi zvisina
Isu tiri kuwedzera kuziva kukosha kwekurarama hupenyu hune hutano, kudya zvine hutano uye hutano uye kuchengetedza ...
Nzira yekudya mashoma makabhohaidhiretsi zuva rega rega
Ichokwadi kuti makabhohaidhiretsi haafanire kubviswa pane zvatinodya. Nekuti vane hunhu husingaperi uhwo ...
Ichokwadi kuti dzimwe nguva zvinotiomera kuti tifambirane nemutinhimira, isu tinowedzera kuneta kupfuura zvakafanira uye kana pasina ...
Sei uchiunza sipinashi mukudya kwedu
kubudikidza Susana godoy inoita 1 mwedzi .
Kune zvakawanda zvekudya zvatinogona kudya zuva rega rega uye izvo zvichatibatsira kusimudzira hutano hwedu. Saka imwe ...
5 hutano hunobatsira hwemagesium
kubudikidza Toñy Torres inoita 1 mwedzi .
Magnesium chinhu chakakosha chicherwa chemuviri wemunhu, sezvo ichipindira mune anopfuura mazana matatu emakemikari maitiro e ...
Mapuroteni anowedzera: mabhenefiti uye zvakaipira
kubudikidza Toñy Torres inoita 3 mwedzi .
Mapuroteni anowedzera ave akakurumbira kwazvo mumakore achangopfuura. Kunyangwe yaimbova chinhu chaive chakabatana ...
Yakawanda sei calcium yekutora zvinoenderana nezera
Kuziva kuwanda kwecalcium yekutora zvinoenderana nezera kunokutendera iwe kuunza ichi chicherwa mune chako chikafu munzira ...
Nei tichida protein yehutano hwedu
kubudikidza Susana godoy inoita 3 mwedzi .
Ichokwadi kuti kuti tinakirwe noutano hwakanaka, tinofanirwa kudya zvine mwero, tichiita maekisesaizi ...
kubudikidza Toñy Torres inoita 4 mwedzi .
Kana iwe uchida kudzikira uremu nenzira ine hutano, pasina kudya kune njodzi uye kusingabatsiri zvine mhedzisiro inonzwisisika-refu mhedzisiro, iwe unofanirwa kuisa ...
Ziva mashandiro evitamini ese
Matipi evakadzi vane rombo rakanaka vanoda kurema
Mhedzisiro yekusaenzana kudya
Chii chokudya uye chii chisingadyiwe kana ndine diverticula?
Chii chinonzi transgenic chikafu?